Daawo muuqaalka: Wasiirka Maaliyadda Somaliland oo ka hadlay Urur-diimeedka Al-Islaax oo la sheegay inuu ka tirsan yahay |
Daawo muuqaalka: Wasiirka Maaliyadda Somaliland oo ka hadlay Urur-diimeedka Al-Islaax oo la sheegay inuu ka tirsan yahay
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda maamulk Somaliland Cabdicasiis Maxamed Samaale, ayaa markii ugu horreysay ka hadlay eedaymo bilihii u dambeeyey dadka qaar u jeediyeen, kuwaasoo ku tilmaamayey inuu ka tirsan yahay Ururro Diimeed oo Soomaaliya ka jiray, sida Urur-diimeedka Al-Islaax iyo kuwo kale oo ku dhaw.
Wasiirka Maaliyadda Somaliland Cabdicasiis Samaale, waxa uu sheegay inuu yahay qof Diinta Islaamka wax ka yaqaanna, isla markaana Diinta ku faana ee aan ka faanin, balse aanu jirin Urur-diimeed kuwa lagu tilmaamay ka mid ah oo uu ka tirsan yahay. Wasiir Samaale oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Xafiiskiisa magaalada Hargeysa, waxa uu xusay in xilka iyo kursigu cadaawad badan qofka bina-aadamka ah ku abuuro, taasina aanay isaga shiddo ku haynin, maaddaama oo uu diyaar u yahay inuu jagada Madaxweynennimo ee Somaliland u tartamo marka uu Madaxweyne Siilaanyo waqtigu ka dhammaado 2015-ka haddii Illaahay gaadhsiiyo.
Si kastaba ha ahaatee, waa markii ugu horreysay ee Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda maamulk Somaliland Cabdicasiis Maxamed Samaale, jawaab cad ka bixiyo eedaha la xidhiidha Ururro-diimeedyo lagu tilmaamay inuu ka tirsan yahay oo uu ka mid yahay Ururka AL-Islaax oo dhawr jeer lagu eedeeyey inay xubno ka yihiin isaga iyo dhawr Wasiir oo kale oo ka tirsan Xukuumadda Somaliland ka talisa ee Madaxweyne Axmed-Siilaanyo hoggaamiyo.
Halkaan hoose ka kaado shirka jaraaid uu qabtay wasiirka maaliyada maamulka Somaliland